ကြာပါပြီ။ ဟိုးအယင်က Metacafe မှာ တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ဟာသလေးပါ။ ကနေ့လည်း မောင်လူအေး တင်ထားတဲ့ Google Alert ကနေ ပို့ပေးလာတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာများဆိုင်ရာ Websites များ စာရင်းထဲမှာ အဲဒီ ဟာသ Site လေး ပါလာတယ်။ မောင်လူအေးကတော့ သွားဖတ်ပြီး ရယ်နေရတယ်။ သူငယ်ချင်းများလည်း သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ Site လိပ်စာလေးများ ဝေမျှခြင်းပါဗျာ။ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့နော။ :)
Filed Under : Engineering, Internet, Sharing
Feel free to visit my website ... http://Test.Tviou.com/
really useful & it helped me outalot. I hope to offer one thing back and aid others such as you helped me.
My web page: viralsocialpop.com
My web blog; on.pro.ac
Feel free to visit my web site :: www.szakibazis.com